Ihe kacha mma maka netbooks | Site na Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Faịlụ FileLet jiri, Nkesa
N’adịghị ka Windows ma ọ bụ Mac, Linux nwere ọtụtụ nkesa na-eji eserese eserese dị iche iche na ngwa na ndabara. Ngwakọta ndị a na-eme ka ụfọdụ "distros" dị ọkụ karịa ndị ọzọ ma ọ bụ na ụfọdụ n'ime ha ka mma maka otu ọrụ ma ọ bụ ụdị ngwaike ụfọdụ, dịka netbooks. Ebuputaghi aha anyi n’ike n’okpuru ebe a; enwere ọtụtụ nkesa ndị ọzọ nwere ike ịrụ ọrụ zuru oke na netbook. Naanị anyị na-agba gị ume ịtụ aro ndị na, n'echiche anyị, bụ ndị kachasị mma ma ọ bụ ndị ezubere iji mee ihe na netwọkụ.
1 Njirimara isi nke netbook
2 Njirimara nke ezigbo netbook distro
3 1. Joliọs
5 3. Linux Bodhi
9 7. pepemint
Njirimara isi nke netbook
Ihe e mesiri ike bụ na ọ dị mfe ibugharị (ọ dị obere ma n'ozuzu ya nwere ndụ batrị ogologo).
N'ihi na ike bụ ya 'agagharị', ọ na-adabere kpamkpam na wireless njikọ (wifi, Bluetooth, wdg)
O nwere obere RAM, ọ kachasị 1GB / 2GB.
Ọ nwere obere ihuenyo.
Njirimara nke ezigbo netbook distro
Njirimara ndị akọwapụtara n'elu na-eme ka ọ dị mkpa maka nkesa GNU / Linux nke nhọrọ anyị iji nweta isi "ike" ndị a:
Na ọ naghị eri ọtụtụ batrị ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, na ọ na-eji ọnụ ọgụgụ kachasị ukwuu nke usoro nchekwa ike.
Na enweghị nsogbu na nchọpụta nke wifi ma ọ bụ bluetooth.
Nke ahụ na-erepịa obere RAM.
Na o nwere interface "dị mma" nakwa na ọ dabara nha ihuenyo (obere) nke anyị na - ahụkarị na netbook.
Jolicloud dabere na Ubuntu, mana ezubere ya ka ọ rụọ ọrụ na kọmputa nwere nkọwa ndị pere mpe n'ihe gbasara ikike diski, ebe nchekwa na nha ihuenyo Ihe ngosi a na-ahụ anya (HTML 5 + GNOME) yiri nke mbadamba nkume ma pụta ìhè maka ọsọ ya na obere nri nke ihe onwunwe. Dị ka a pụrụ ịhụ na nseta ihuenyo, JoliOS na-elekwasị anya iji gbaa ọsọ ngwa weebụ (ụdị ChromeOS), nke ọ na-eji Mozilla Prism. N'ọnọdụ ọ bụla, ọ ga-ekwe omume ịwụnye ngwa ndị ala, dị ka VLC vidiyo, ọ bụ ezie na ọ na-agwaghị na distro a ga-afanyekwa ihe ọ theụ allụ niile ma ọ bụrụ na ejikọ anyị na Internetntanetị, ọ ga-ekwe omume iji ya- ahịrị.
N'ikpeazụ, ekwesịrị ịmara na ọ ga-ekwe omume ịwụnye JoliOS n'ime Windows ma ọ bụ Ubuntu (beta) dị ka a ga - asị na ọ bụ naanị ngwa ọzọ, nke dị mma maka ndị chọrọ ịnwale ya tupu ịwụnye ya n'ikpeazụ.
Ọ bụ Ubuntu dabeere distro na-eji LXDE desktọọpụ gburugburu ebe obibi. Ọ na-apụta maka oke ike akụ ya na maka myirịta nke ihu ya na nke WinXP ugbu a, nke mere ka ọ mara mma maka ndị na-ewere nzọụkwụ mbụ na GNU / Linux.
Ọ bụ ezie na a na-atụ aro distros niile dabere na LXDE maka netbooks, Lubuntu bụ ihe kacha mma maka ndị bịara ọhụụ, ọ bụghị naanị n'ihi myirịta nke anya ya na WinXP, dị ka anyị hụburu, kamakwa n'ihi na ọ na-eketa otu nnukwu Ubuntu. obodo, na-eme ka ọ dị mfe idozi nsogbu ọ bụla nwere ike ịda.
3. Linux Bodhi
Ọ bụ nkesa GNU / Linux nke jiri ikike zuru oke nke njikwa window Enlightenment. N'ezie, ọ bụ otu n'ime nkesa ole na ole Enlightenment na-eji. Ọ na-abịa, na ndabara, na ntakịrị ngwa nke ngwa dịka ihe nchọgharị, ihe ndezi ederede, nchịkọta ngwugwu ngwugwu, wdg.
Kpomkwem, minimalism bụ otu n'ime echiche n’azụ Bodhi Linux, nke bụ ya mere na ọ dịghị ka akwadoro maka newcomers, ọ bụ ezie na ọ na-atụ aro maka ndị nwere ụfọdụ ahụmahụ na Linux. Ihe kachasị mma banyere distro a bụ ọsọ ọsọ ya na usoro sistemụ dị ala, yana ị na-enye ọmarịcha ahụmịhe desktọọpụ, dị mfe iji ma dezie ya.
Budata Bodhi Linux
Ọ dabere na Debian ma jiri njikwa windo Openbox. A haziri usoro a iji nye ezigbo nguzozi n'etiti ọsọ na arụmọrụ. Ọ dị ka Debian n'onwe ya, na mgbakwunye na itinye ihe ndabara na ntanetị nke oge a nwere ike ịhazi nke ọma, na-eme ka ọ bụrụ nke zuru oke maka ndị nwere obere ego.
Adịghị m ikwubiga okwu ókè na-ekwu na ọ bụ otu n'ime nkesa GNU / Linux kachasị mma dị n'oge a.
Ọ bụ distro dabere na Puppy Linux mana ọ na-eji nchịkọta Ubuntu. Ọ nwere gburugburu desktọọpụ enyi na enyi yana ụfọdụ njirimara na-enye ya ọdịdị (ọ bụ ezie na ọ ka dị anya) nke Mac OS X.
Macpup sitere na ndabara na ọtụtụ ngwa anaghị akwụ ụgwọ, dịka AbiWord, Gnumeric, SeaMonkey na Opera. Ihe njikwa windo a na-eji eme ihe bụ, Enlightenment, nke na-apụ apụ maka ezigbo arụmọrụ ya na obere usoro ihe onwunwe.
Ọ bụ nkesa GNU / Linux dabere na Arch Linux, nkesa a na-atụ aro maka ndị ọrụ toro eto, mana o nwere usoro nchekwa ya. Ihe nkesa a bu ihe enyi na enyi mgbe ị na-ejigide atụmatụ Arch, dị ka njikwa ngwugwu Pacman na ndakọrịta AUR (Arch User's Respository). E wezụga ụdị nke mbụ na XFCE enwere nsụgharị ọrụ (ọkụ) nke na-eji njikwa windo OpenBox. Enwekwara mbipụta obodo nke na-eji E17, MATE, LXDE, Cinnamon / Gnome-shell, na KDE / Razor-qt.
Manjaro pụtara maka ịdị mfe ya na ọsọ ya, na-etinye ike Arch Linux na iru onye ọrụ "nkezi / elu".
Ọ bụ sistemụ arụmọrụ nke igwe ojii nke na-eji ezigbo usoro nke ngwa weebụ abịa na ndabara. Ọ dabere na Lubuntu ma jiri gburugburu desktọọpụ LXDE.
N'adịghị ka nkesa ndị ọzọ "web-centric", dị ka ChromeOS ma ọ bụ JoliOS, Peppermint nwere interface dị ezigbo mma maka ndị na-abịa site na Windows ma na-ahọrọ menu "Start" kpochapụwo.
Ihu ọma Zorin OS ka emere iulateomi usoro sistemụ ndị ọzọ. Nwere ike ịhọrọ Windows 2000 ma ọ bụ Mac OS X. Maka Windows ọrụ a distro na-enye a maara anya. Ke adianade do, ọ bụ nnọọ mfe iji, ọ bụ ezie na ọ na-abịa na ole na ole ngwa arụnyere na ndabara.
SolydX (XFCE) bụ ntọhapụ nke ọkara na-adabere na Debian. Ebumnuche ya bụ ka ọ dị mfe iji, na-enye ọnọdụ kwụsiri ike ma dịkwa mma. Versiondị akwadoro maka netbooks na-eji XFCE dị ka ebe desktọọpụ, ọ bụ ezie na ọ na-echetara KDE. SolydX na-eji wicd njikwa njikwa maka njikọ Internetntanetị wee bịa na flash na MP3 codecs arụnyere na ndabara. Na mgbakwunye, ọ gụnyere ọtụtụ ngwa dị fechaa: Firefox, Exaile, VLC, Abiword na Gnumeric.
Sistemụ arụmọrụ "web-centric", dabere na ihe nchọgharị nke otu aha na Linux. Ọ bụ sistemụ ejiri na Chromebooks na-ewu ewu.
Otu n'ime ihe Google pụtara bụ ọsọ nke sistemụ, yana oge buut nke 8 sekọnd na oge nkwụsị dị mkpụmkpụ, na mgbakwunye na ọsọ ọ na-emepe ngwa weebụ ya. A na-akwado akwụkwọ niile, ngwa, ndọtị, na nhazi ọ bụla n'ịntanetị n'okpuru igwe ojii ịkọwapụta igwe ojii. Yabụ ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ funahụrụ igwe ya, ọ nwere ike ịnweta ọzọ ma ọ bụ nweta site na igwe ọzọ, wee nweta otu data ahụ ọ debere na mbụ.
Dị ka anyị na-ahụ n'ụwa nke ngwanrọ n'efu enwere ọtụtụ nhọrọ maka netbooks. Ekwesiri ime ka o doo anya na nkesa ndi edeputara ebe a etinyeghi n'usoro. N'ikwu eziokwu, nkesa kachasị mma ga-abụ nke kacha dabaa mkpa onye ọ bụla na nke ahụ dịgasị iche. N'ikwu okwu n'ozuzu, m ga-akwado "ndị ọhụrụ" ka ha nwalee Lubuntu, Crunchbang ma ọ bụ MacPup, ebe ndị "dị elu" nwere ike ịnwale Manjaro ma ọ bụ SolydX.
N'ikpeazụ, m ga-ekele ndị ọrụ niile nke ndị a distros nwere ike iziga anyị ihe ha kwuru ka ntinye a wee baa ọgaranya ma baa uru maka ndị nwere netbook ma na-eche ịgbanwe usoro sistemụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Distros kacha mma maka netwọkụ
Ihe 121 kwuru, hapụ nke gị
Enwetara m debian na netbook m. Echefuru m kpamkpam ịnwale Chrome OS> - <haha
Leon Jl dijo
nke kedu nke distro ndị a ka ị kwadoro maka Compaq Presario dị ọhụrụ na nke a ma ọ bụrụ na achọrọ m ịgbanwee linux
Zaghachi Leon Jl
Ndewo, gbalịa ma nwaa Manjaro ma ọ bụ Lubuntu.
Ogbodo 69 dijo
Site na 64-bit Manjaro XFCE (laptọọpụ m nwere 6GB nke RAM) laptọọpụ na-ekpo oke ọkụ, agbalịrị m ịgba ọsọ Dota 2 ma ọ dị oke ọkụ nke na ọ kwụsịrị imechi.
Zaghachi Sasori 69
pansxo in dijo
O nwere ike ịbụ n'ihi nsogbu ngwaike, ọ gaghị adị ọkụ ma ọ gwụla ma ị na-etinye nnukwu mgbali na nhazi ahụ, nke m na-echeghị. Gbalịa linuxmint xfce 64 bit. Ọ bụ ihe m ji ma ọ dabara m nke ọma. N'ihe banyere ịga n'ihu na-ekpo oke ọkụ, ana m akwado ka ị kpochaa pc gị ma gbanwee mado ọkụ ahụ. Ekele na jisie!
Zaghachi na pansxo, en
ogologo ma na-agbagọ ụzọ na-achọ nkesa kwesịrị ekwesị. M na-anwale dịkarịa ala 10 distros na laptọọpụ ekpo oke ọkụ dị egwu. Ọ bụghị nsogbu ngwaike, ọ bụ nsogbu Linux, yana nsogbu ama ama. Agbalịrị m ubuntu, lubuntu, xubuntu, kubuntu, debian mate, debian kde, debian xfce, crunchbang (bunsen), crunchbang ++, linuxmint kde, Linux lint n'okpuru 70). na naanị distro na-adịghị kpo oku bụ na kali, ma kali m na-achọghị kali dị ka isi distro, Achọrọ m ihe dị mma na-erughị aka. Aga m anwale solydx ka m hụ otu m si eme
Zaghachi ka da3m6n
Luis Miguel Mora dijo
Na Ubuntu ọ bụla nke dabeere na distro wụnye cpufreq ma tinye ya na ọnọdụ PowerSave, n'ụzọ ahụ ọ ga-edebe usoro ojiji dị ala yana ọ gaghị ekpo ọkụ (tinyekwa psensor iji nyochaa ọnọdụ okpomọkụ gị)
Zaghachi Luis Miguel Mora
Kedu ihe sistemụ Linux ị ga-akwado maka acer na-achọ, ọ bụghị netbook. Achọrọ m ka ọ dị ntakịrị ọsọ n'ihi na ịgwa eziokwu na ọ na-agba nwayọ nwayọ
Gustavo Ramirez ebe obibi oyiyi dijo
M nwalere 3 distros maka HP Mini 110 na ihuenyo 10.1 inch.
Nanị ihe achọrọ m nwere bụ na ndị ọkwọ ụgbọala ikuku na-arụ ọrụ n'emeghị ihe ọ bụla na ya, ya na ndị ọkwọ ụgbọ ala na-arụ ọrụ ị nwere ike idozi ihe ọ bụla, nri? 😉
Crunchbang: Ọkacha mmasị m ebe ọ bụ na m gbalịrị ya, dabere na Debian bụ nnukwu ọkụ, ọ bụ interface pere mpe, yabụ atụla anya "swiiti anya" site na distros ndị ọzọ, maka netbook ọ dị ezigbo mma na ihe ọjọọ bụ na ọ na-efu obere m na-arụ ọrụ iji hazie ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nhazi niile ka a ga-eme na faịlụ nhazi, ihe dị mma bụ na ọ na-eweta ndị na-ebupụta ihe maka ndị a na menu. Ihe ojoo bu na ikuku akaghi aru n’oge mbu. Uru nke a bụ na ọ bụrụ na ịnwere ohere ijikọ ya site na eriri ethernet ị nwere ike iwunye ihe niile na enweghị nsogbu ọ bụla, ọ na-eweta edemede mbido nke na-ebuwanye mmemme na ndị ọkwọ ụgbọala ugbu a, maka multimedia, wdg.
EasyPeasy: Nkesa a kwesiri ịbụ ihe pụrụ iche maka netbooks, arụnyere m ya, ọ dịkwa mma, enyeghị m ya oge iji nwalee ya ebe ọ bụ na ikuku anaghị arụ ọrụ oge mbụ.
OpenSUSE 12.1 (Gnome): Distro a bụ nke m rụnyere, ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ na-enweghị ihe ọ bụla na ya, m wụnye Chrome na multimedia codecs na ọ na-arụ ọrụ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Dịka i kwuru, netbook a bụ maka ịlele ịntanetị, ozi, LibreOffice, wdg. ya na OpenSUSE ọ n’arụ m oke. Karịsịa, GNOME 3 dị mma, enwere m mmasị na ya karịa 2
Zaghachi Gustavo Ramirez
Anọ m na-achọ otu ihe ahụ, m nwara Lubuntu, Elementary OS Luna na beta 1 na 2 nke Freya na Deepin Linux. Naanị distro nke achọpụtara kaadị wi-fi bụ Deepin Linux, mana enwere mgbe ọ na - eme nwayọ nwayọ. Na OS nke mbụ ị ga-arụ ọrụ n'ihi na ịbụ onye ọkwọ ụgbọ ala anaghị etinye ya na akpaghị aka, Lubuntu bụ akụkọ dị iche na ị ga-arụsi ọrụ ike iji wụnye ọkwọ ụgbọ ala !!! ...
ụmụ okorobịa ... akwụkwọ ntanetị na akwụkwọ ndetu ... ha dị iche iche ... emehiela ... akwụkwọ edetu pere mpe ... yabụ na ọ bụghị distros niile na-emegharị na ihuenyo nke ihe ruru sentimita 11 ... dịka ọmụmaatụ. .. na ubuntu 12.04 ... ihe niile Ọ dị mma .. mana mgbe emeghere windo maka nhọrọ dị ka ịgbanwe akwụkwọ ahụaja ma ọ bụ ndị ọzọ ... akụkụ ala nke windo ahụ zoro ezo na ụfọdụ bọtịnụ dịka ịnakwere ma ọ bụ kagbuo (ọ dabere na ikpe) enweghị ike ịpị ... na na ihuenyo nhọrọ naanị otu nhọrọ na-egosi ... na-enweghị ohere nke mgbanwe ... agbalịrị m ya na akwụkwọ msi, hp na acer ... yana ya atọ bụ otu ihe ahụ ... na ps ọ bụrụ na ị maara nke ọ bụla na-emegharị na ihuenyo akwụkwọ ederede ka m mara. abụla gachos ... ekele ..
ihe pixie dijo
Ọ gbagwojuru gị anya
Netbook bụ obere kọmputa nwere mkpokọta 10 sentimita asatọ nke ihuenyo
Akwụkwọ ndetu bụ laptọọpụ ukwu nke buru ibu.
xubuntu na lubuntu nwere ike diri gi nma. Anọ m na-eji xubuntu 14.04 yana nke ọma na 1 gig nke ebulu nwere asus neetbook si 8 afọ gara aga. Daalụ Jorge
Kedu ihe gbasara xpud? Ọ dị oke ọsọ ma dịkwatụ iche na ọ na - ewe ntakịrị mgbanwe, ọkachasị ndị ejiri ya na desktọọpụ.
Enweghi ike ịme ọtụtụ, mana ịnyagharịa, guzobe ogbako vidiyo site na iji Skype ma rụọ ọrụ na Open Office ọ zuru oke.
Karịsịa mgbe SSD nke Acer m kwụsịrị ịrụ ọrụ.
Juan Barra dijo
Ọ ga-adị mkpa ikwupụta ututo atom maka ụdị nhazi ahụ 🙂
Zaghachi Juan Barra
Ozi gị dị oke mma. Daalụ
Enwere m nsogbu na laptọọpụ m, m wụnye UBUNTU 11.10, dị ka ngwa mana ọ na-apụta na site na ịmalitegharia na ịbanye na fan na ọ na-arụ ọrụ oge niile, na-eme ka PC m dị oke ọkụ, Achọrọ m ịma ma ọ bụrụ na nke ahụ ndị a na-egosipụta distros ebe a.
Raimundo riquelme dijo
Enwerem Ubuntu 12.04 na Samsung netbook m na enwe obi uto! Ọ bụ ezie na ọ dịghị njọ ịmara ụzọ ndị ọzọ 🙂 Ekele
Zaghachi Raimundo Riquelme
Ricardo C. Lucero dijo
Enwere m netbook Samsung N150 Plus ebe m nwalere Ubuntu 12.04 na Joly. Ha dị iri! Ugbu a enwere m Mandriva 12 etinyere ma ọ masịrị m ya… M na-eji ya na desktọọpụ KDE !!!
Zaghachi Ricardo C. Lucero
Daniel Rossell kwuru dijo
Kuki Linux adịghị na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, n'agbanyeghị agbanyeghị ego m nyere ya, ahụghị m njikọ iji budata ya. Enwere m onye na-achọsi ike ma chọọ n'ezie ịnwale nkesa ahụ. Onwere onye maara ebe m nwere ike ibudata ya?
Zaghachi Daniel Rossell
ElementaryOS ọ ga-adaba n'ime ndị akwadoro?
elementrị OS bụ 10! M na-eji ya bụ isi OS m
Ha kwesiri ihu otu mmepe nke ISIS si aga, ha gha ada mgbe ha huru isis ... obu ihe kachasi nma distro na UX na UI nke m chere di na Linux, obi abua adighi ya na elementary na aru oru oma, ya na-ewute m na enweghị m oge inye aka mana oge a Achọrọ m inye ihe dịka $ 10 mgbe isis bịara ...
Ọ dị mma !!
Enwere m onye Acer Aspire One, kedu ihe ị na-atụ aro ya?
Anọ m na Lubuntu ma ọ dị okomoko rue obere obere ọ were m ogologo ibu ihe niile, amaghị m ihe kpatara ya.
Echere m na Lubuntu bụ ezigbo nhọrọ. I nwekwara ike gbalịa otu dabere na Openbox, dị ka Crunchbang (dabere na Debian) ma ọ bụ gaa n'akụkụ gbara ọchịchịrị nke ike ma nwaa Arch (ọ bụ ezie na ọ bụ maka ndị ọrụ toro eto karịa).
Na-efu ihe kachasị mma, Point Linux na desktọọpụ MATE, dabere na ụlọ Debian 7. 🙂
Zaghachi ka ụra
Mmasị Interest Amaghị m ya. Aga m ele ya anya.
Daalụ maka izu ụra gị, Point Linux Ana m anwale ya na mini mini, ọ na-arụkwa ọrụ dị ka silk, karịa Ubuntu, mana nke a bụ mmetụ aka na ihuenyo ọ bụrụ na ị maara mmepe ọ bụla maka nke a, na ụda na ndị na-ekwu okwu. na-ada m, o na-egbutu mana mgbe m tinyere ekweisi nsogbu adighi same .. Otu ihe ahu di na Ubuntu 12 mana kemgbe m azutara ya m wepuru W7 afo ato gara aga (a na m eji Linux kemgbe 98 mana abughi m onye okacha amara…) kwuo a »nkịtị» onye ọrụ)
Na ahụmịhe nke m, ọtụtụ afọ gara aga ha nyere anyị ọtụtụ netbook Asus EEE PC, dị obi umeala, Celeron 700Mhz, 512 DDR2 RAM, 4 GB SSD disk na ihuenyo 7 ″. obere akụkọ, nhọrọ kachasị mma n'oge ahụ bụ Debian na LXDE, anyị hazie ha nke ọma wee nye ha ụlọ akwụkwọ ime obodo. anyị na-etinye brọdband mobile na wifi na cabling network. Anyị wụnye akụrụngwa n'ime ụlọ kọmputa ma ọ bụ ya, ihe niile ejikọrọ na netwọk na ngwa nbipute laserjet HP. enwere nsogbu na ikiri vidio vidio (nke kachasị n'ihi EEE PC processor), yabụ anyị tinyere pc dị ike karị na projector na voila. Afọ 5 gara aga na kọmpụta ndị ahụ ka na-agba ọsọ, anyị na-aga ugboro ole na ole n'afọ iji melite ihe nchọgharị ahụ (Chromium) na voila. N'ime 4GB nke SSD, enwere ihe karịrị 1GB n'efu maka ihe dị iche iche, n'ihi na a na-emekọ faịlụ ndị ahụ na sava etiti.
N'echiche ahụ, ịbawanye ụba nke Debian ebe ọ bụ na distros ndị ọzọ ga-achọ ya (ma kpachara anya, m bụ Susero / Redhatero n'obi)
Daalụ maka ịkekọrịta ahụmịhe gị.
Ahụmahụ na-akpali akpali!
M na-ekwu n'elu, na m gbalịrị nnọọ ole na ole distros na lxde xfce desktọọpụ, wdg .. na nke ahụ tụrụ m n'anya site n'ịdị na-aga were were, nke ndị niile m nwalere bụ LUBUNTU .. Achọpụtara m na ọ dị ịtụnanya na distros na otu desktọọpụ (xfce) ga-agba ọsọ dị iche iche.
Na nchịkọta, maka onye ọ bụla na-eji netbook ma ọ bụ kọmputa nwere obere ihe m na-akwado xfce, ha agaghị akwa ụta.
Ndewo pansxo, na:
Amaghị m ha n'ezie mana ọ dị m ka Lubuntu jiri LXDE na Xubuntu XFCE.
gbasie! obere ahụhụ na m ikwu haha ​​nke a bụ illukki, lubuntu na-eji LXDE
Nke ahụ ziri ezi, Lubuntu na-agba LXDE ọsọ. 🙂
Ezi ụmụ okorobịa, enwere m Acer aspire AO250 netbook na m gbalịrị ihe ndị a, Linux Linux xfce; xubuntu 12.04, elementary os. Obi abụọ adịghị ya na nke mints atọ na anya mechiri emechi na oriri nke 128mb na mbido ọ bụ nke obere nchekwa na-enye m nri, ugbu a site na nhọrọ ndị a, m na-atụgharị ahụhụ na m ga-anwale bodhi, ekele gị Ariki
N'okwu m, etinyere Manjaro Xfce na netbook enyi m nwanyị. Emere m ya na isiokwu Trisquel n'ihi na ị masịrị ya karịa. Eziokwu bụ na ọ dị ka ọ kwụsiri ike ma dịkwa mfe iji; ya onwe ya na-ekwu na ọ malitere inwe mmasị na GNU / Linux. Nanị nsogbu m nwere bụ na igodo maka nchapụta ihuenyo anaghị arụ ọrụ (agbalịrị m ihe ngwọta na post ebe a mana enweghị ihe ọ bụla) agbanyeghị na ọ dịghị mkpa.
Ihe yiri nke a mere m na nwanne m nwanyị, yana netbook samsung .. ọ na-enye nsogbu na ọkụ, nsogbu bụ, mgbe ị gbanyere laptọọpụ na batrị, ọ na-agbanye dị ka ọnọdụ nchekwa ọkụ ma ị nweghị ike iji aka ya bulite ya, naanị ihe ga - eme ka ịgbanye ya ọzọ na ike ejikọrọ, wee jiri ya na batrị, si otú a na - eme ka ọkụ ahụ dị elu.
Nke a anaghị arụ ọrụ?
Ọ na-emetụ m n'ahụ na enweghi ndị aka nri na KDE na plasma-netbook. M na-eji chakra ma eziokwu na-agba ọsọ mana ọ kachasị mma na 2GB RAM
Zaghachi Hector Zelaya
... n'echiche m, nke sitere na ihuenyo 10-inch, plasma-netbook adịghị ka ọ dị mkpa. Na desktọọpụ ma ọ bụ ọnọdụ "Pc" ihe niile dị mma.
Akwụsịghị Joli Cloud n'oge na-adịbeghị anya?!
Ọ bụghị na m maara. Saịtị ahụ ka na-arụ ọrụ ma ọ naghị ekwu na akwụsịla ya.
Echetara m ịgụ ya ...
Akụkọ dị mwute, amaghị m.
En http://jolios.org/ Okwughi ihe obula banyere ịkwụsị ya ... nke ọma ... Amaghị m.
Nwanne m nwanyị nwere netbooks, ihe na-erughị otu ọnwa gara aga m wụnye Lubuntu, n'ihi eziokwu ahụ na ike gwụrụ ya nke windo na-eme ka igwe gị kwụsịlata nke ukwuu, n'oge na-adịbeghị anya ọ kpọrọ ya ma gwa m na ọ maralarịrị OS nakwa na mmemme ahụ mepere ngwa ngwa ma ha na - agbasakarị nke ọma.
N'aka nke m, ụbọchị ole na ole gara aga, m wụnye Debian + LXDE na netbook m, ọ na-arụkwa ọrụ dị ukwuu: ngwa ngwa, ịrụ ọrụ nke ọma, na-elekọta ọnọdụ okpomọkụ yana n'ozuzu m masịrị m. Tupu m rụnye Manjaro + LXDE (otu obodo) ma ọ naghị arụ ọrụ nke ọma, oke ahụ na-apụ oge niile, ọ na-ekpo oke ọkụ yana n'ozuzu mgbanwe ahụ adabaghị m, ọ ga-abụ n'ihi na emeela m ka Debian mara m desktọọpụ PC N'ọnọdụ ọ bụla, m ga-enye Manjaro ohere ọzọ mana na PC, na oge a na ụdị nsụgharị.
Lubuntu bụ ezigbo nhọrọ, mana ọ na-ewute na ụdị nke ugbu a "13.10" nwere nnukwu nsogbu na Xscreensaver na nsogbu ahụ bụ na ọ B BGHR iweta ya na enyo na-agba ọchịchịrị mgbe 3 min, na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ị wụnye obi ụtọ Xscreensaver, ọ naghị etinye mgbanwe ndị ahụ
Nzaghachi ka onu ahia
Amaara m na m na-efu ụfọdụ ... 🙂
Slitaz bụ ezigbo nhọrọ ...
Nnọọ ezigbo ntinye.
Chei, nwute mana njikọ Google Chrome OS ezighi ezi, ọ bụ njikọ Cr Os, ha abụghị otu.
Enwere ọtụtụ ndị m na-amaghị, ọkachasị Bodhi Linux, ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ ịnwale ha
mana maka akwukwo m choro kariri lubuntu, obu ya nke diri ya nma 😛
My netbook bịara na SUSE Linux 11 na mbido, ọ bụ Compaq Mini CQ10-811LA, ọ na-efu m 800 naanị afọ abụọ gara aga, mgbe obere oge m chọrọ ịgbanwe, enweghị m echiche ịme ndabere ma ọ bụ ihe ọ bụla ma yabụ m malitere. onwe m, ọ bụrụ na arụghị m ọrụ n'ihi na enweghị m ike ịpụ na USB, mgbe obere oge chọtara aghụghọ ahụ, mgbe UnetBooting na-ebu ibu, aghaghị m ịpị igodo ọ bụla ma ọ bụ naanị mgbe ahụ ka m buuru, wụnye EasyPeasy n'ihi na ọ bụ naanị ya na booted (na mbụ m chere na nke bụ ọrụ ebube, ma mgbe ahụ, m hụrụ na atọ na-agbalị ọzọ distros), ma m wifi amataghị m na m ga-eji USB.
Ike gwụrụ m ma wụnye OpenSuse 12.2 KDE, ọ dị nkezi, mana enweghị m ahụ iru ala.
Achọtara m Fuduntu na ... ọfụma na m hụrụ n'anya, ihe niile na-arụ ọrụ zuru oke, ọbụlagodi batrị dịgidere ogologo oge, trackpack rụrụ ọrụ nke ọma, LibreOffice wetara isi mmalite nke enyi na enyi mana ọrụ ahụ kwụsịrị na mgbe enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla enwere m mmasị (Kubuntu, Lubuntu, Linux Mint, Puppy, OpenSuse) Ekpebiri m ịwụnye Win7, ma lee m.
N'oge na-adịbeghị anya, m na-ezube ịwụnye Lubuntu na netbook m na nkebi ma nọgide na-anwa ndị ọzọ ruo mgbe m chọtara nke na-enye m mmetụta ahụ Fuduntu nyere m
N'iru! To ga-anwale ... ...
… A na m eji netbook a otutu ihe m na ede. Intel Atom 64 bits - 1,6 Ghz na ebule 2 Gb. Anọ m na debian mgbe niile, n'agbanyeghị na m ma na ọ dịghị mma na mbụ, ahọrọ m itinye KADE na wheezy -kernel 3.2 na kde 4.8-. ma m na-eje ije. Dolphin ewe 3 ma ọ bụ 4 sekọnd kemgbe ị na-agba ya? ee ... ma mgbe ahụ ọ na-aga were were. Icewesel ewerela ogologo oge ... ihe dị ka sekọnd 10 ... mana ebe ọ bụ na mbipute 27, ịdebe na weebụ dị oke ọsọ. O gosiputara na o di ocha karie ihe nhazi m ga - ekwe. M na-eji java na clementine, ihe niile mepere na KADE ma ọ gaghị akarị 1,6 ebule .. ya na libreoffice, echefuru m.
Now nwere debian sid -kernel 3.12 na kde 4.11- na ihe ọ bụla were (nke na-adịghị ogologo oge) egbutu n'ọtụtụ ọnọdụ na ọkara.
Moral: desktọọpụ ọkụ (lxde, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ naanị igbe oghere) agaghị egbochi ngwa dị ka ihe nchọgharị, offimatics, nke na-eji java ma ọ bụ imewe ọsọ ọsọ.
Yabụ, ọ bụrụ na ị nwere 2 Gb nke ebule, ị nwere ike tinye kde ma ọ bụ gnome n’ụzọ dị mfe n’enweghị nnukwu nsogbu (ọ bụ ezie na ọ dị m ka gnome na-eri ihe karịa, anaghị m echeta ihe kpatara m jiri nwaa ya obere).
Nke ahụ bụ ahụmịhe m na ọ bụ eziokwu. Ọ bụrụ na e nwere kernel mara mma na njiko agbakọtara maka netbook nke m hụrụ na ụgwọ mana maka 32 bits. Nke a ma ọ bụrụ na ọ nwere ike inyere aka ịrụ ọrụ n'ozuzu, ọ bụghị kama distro na desktọọpụ gị.
Echefuru m ikwu otu ihe dị mkpa. Ọnọdụ okpomọkụ dị karịa 40 C na ihe na-erughị 50 C n'okpuru ọnọdụ nkịtị. Batrị ahụ mgbe otu afọ gachara na-eme m ihe karịrị awa atọ dịka o mere na mbido. Enweghị nsogbu na ihe ndị ahụ. Njikwa ahụ yiri ka ọ dị mma !!
Edem ibuotikọ oro enem mi etieti. Imirikiti nkesa a m amaghi banyere ewezuga Manjaro na ChromOS. Aga m anwale ha dị ka igwe mebere iji hụ ihe ha dị ka m.
Ezi! Nke ahụ bụ echiche ahụ. Gbaa ha ume ka ha gbalịa ihe ọhụrụ. 🙂
M maka netbooks ma ọ bụ cruchbang ma ọ bụ Archbang abụọ dị ka ezigbo nhọrọ, maka uto m ọ na-abịa site na nchịkọta.
Zaghachi ka ọ fụọ
Maka m, Archbang jikọtara ụwa kachasị mma. Ọ bụ nnukwu nhọrọ. Ọ ga-afọ nke nta ka m nwee ike ikwu na otu n'ime ihe kachasị mma (dị fechaa).
Diego Garcia dijo
M wụnye lint lịnetị na HP G42 HP n'ihi na echere m na ọ bụ ọkụ ...
Kedu ihe ị chere dị mma? ma obu ikwado ndi ozo n’ime ndi a ma obu obu gini?
ihe m na-achọ ịrụ ọrụ, ị maara, ọsọ wdg ...
elementaryOS na netbook na-arụ ọrụ nke ọma, n'ezie, nwere mmetụta nwere nkwarụ, onyinyo na ihe niile, mana ọ ka mara mma ... eziokwu bụ, ọ (enweghị mmejọ) dị ka miniMac mana enwere ike iji ya.
Ma eleghị anya, ọ bụ n'ihi na ọ fọrọ nke nta ka e dee ya na Vala, mana m na-akwado ya.
Zaghachi ka edgar.kchaz
Echefuru m, ịnwale gam akporo maka PC na Chrome OS, achọrọ m ịmata ihe ...
Na-akpali mmasị! Daalụ maka ịhapụ okwu gị.
elementaryOS dị ka silk, ihe niile na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Daalụ maka mkpokọta ahụ, ebe ọ bụ na ọkụ draịvụ m mini mini gbara ọkụ, ana m anwale distros, imirikiti ha dara na njikọ wifi, ana m eji ha site na ịmalite site na pendrive, m ga-achọ ịkọ na ọ bụrụ na m wụnye ha ọ bụ wifislax na na-arụ ọrụ 100% na wifi mana enweghị ụlọ ọrụ mepere emepe ma ọ bụ ụlọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ, anaghị m aghọta ọtụtụ ihe gbasara nnọgidesi ike mana enweghị m ike ịchekwa mgbanwe ndị m na-eme na nnọgidesi ike mgbe njedebe ọ jụrụ ka ịchọrọ mgbanwe ndị a ga-adị maka nnọkọ n'ọdịnihu? ịrụ ọrụ na ịntanetị dị mma.
Aga m anwale ndị niile edepụtara ebe a, ekele, gaa n'ihu na ekele maka ozi a.
Zaghachi ka yan
Wilson Cortegana dijo
Ndewo, enwere m olile anya na ha za m haha, ma enwere m netbook Samsung N102SP, m wụnye Ubuntu 13.10 ụbọchị ole na ole gara aga ma eziokwu bụ na enwere m mmechuihu n'ihi arụmọrụ ahụ (ọ dị nwayọ karịa, mgbe m nwere windo 7), ugbu a ịgwa m banyere distros ndị a, ọ ga-amasị m ịmata nke ga-aka adịrị m mma.
Zaghachi Wilson Cortegana
Ekwadoro m Linux Linux 16 na xfce desktọọpụ. Ọ bụ distro zuru oke nke nwere kọmpụta kọmịị na-arụ ọrụ kachasị mfe. O doro anya na distro a adịghị emechu gị ihu. Jisie!
Enwekwara m netbook ahụ, M arụnyere CrunchBang 11 ọ naghị amata gị (ma ọ bụ enwere nsogbu) na kaadị ntanetị, emesịrị m tinye Lubuntu mana m ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala. Ugbu a, ahọrọla m maka elementrị OS, enweworị otu o si aga.
Ndewo, abum onye ohuru ebe a, a na m agu akwukwo na ihe ufodu, achoro m ka ikwado distro maka netbook m. Ọ bụ a Packard Bell dot se2, na Intel atom n570 processor, 1gb DDR3 RAM, Windows 7 ... Enwere m olileanya na ị ga-enyere m aka n'ihi na enwere m ntakịrị nsogbu mgbe m na-ahọrọ nke kachasị mma, nsogbu netbook m adịghị nwayọ nwayọ. mmeghe nke mmemme na ibe weebụ ma na-arapara mgbe niile.
Ekwadoro m Linux 16 x86 na desktọọpụ xfce. Nwara na netbook na yiri atụmatụ.
Nye elementaryOS nwaa ma jiri Chromium dochie Midori. Na-efe efe!
Ezigbo onyinye, m ga-anwale Lubuntu na akwụkwọ ndekọ 1GB RAM.
Psdt: cannwere ike ịgbakwunye Damn Small Linux, distro nke naanị 50 MB; Cheers!
Kedu distro ị na-atụ aro maka Toshiba NB50 na 2GB (gbasaa) ya na 4-afọ petadisimo processor?
Ọ bụrụ na ọ bụ chrome OS, kedu ka m ga esi ebu ya?
Ndo ọ bụ
ee, ị chere na Point Linux ga-aga nke ọma na net net m (Toshiba NB250) yana Intel Atom processor nke dị afọ anọ ma bụrụkwa petadisc?
Salamdreate na salamandreo wepu na salamander bu salamander ma ana m akwado salamandri 92.4 na salamander bu salamander gi salamander
Naanị ụbọchị ole na ole gara aga, anọ m na-amụ ihe niile metụtara Linux, dịka onye ọrụ Windows, enwere m mmetụta enweghị mmasị na ya mana m ga-asị na m nwere nnukwu ịnụ ọkụ n'obi ma chọọ ịmalite iji yana na-agagharị na mbara igwe Software na-akwụghị ụgwọ maka nnukwu ego nke ohere ọ na-enye, ma ọ kachasị n'ihi ọdịdị mmadụ nke echiche a nke ịkekọrịta ihe ọmụma maka ọdịmma mmadụ niile, ekele maka onyinye, ekele.
Ndewo, gịnị ka ị kwadoro maka netgb ebule 1gb na 1.6GHz mono core processor? M na-eche banyere ELementary OS.
Elementary Os… bu ezigbo distro… di ntakiri ma mara mma. Ma ọ dị nwute na ngwaike gị anaghị ahụ ya dị ka nhọrọ kachasị mma ebe ọ bụ desktọọpụ dị ntakịrị karịa karịa ndị ọzọ dị ka lxde ma ọ bụ xfce. Ọ bụrụ na ị chọghị ịma nke ukwuu maka akụkụ ahụ, ana m akwado gị lubuntu na desktọọpụ lxde, nke kachasị m nwalere ruo ugbu a. Nnọọ mmiri maka igwe na obere ngwaike ma ọ bụ dịka nhọrọ nke abụọ mana tad chọrọ karịa nke mbụ linuxmint na desktọọpụ xfce n'echiche m karịa mara mma karịa lxde mana m na-emeghachi ihe ị chọrọ chọrọ. Enwere m olileanya na ị nwere obi ụtọ ma gwa anyị otu esi eme ya.
Jose J Gascon dijo
Agbalịrị m ọtụtụ nkesa Linux na Netbook si Mint, site na Debian, Android, wdg. Enwere m nsogbu na nchapụta desktọọpụ, ruo mgbe m nwara Linux Ultimate Edition 3.8 http://ultimateedition.info/, ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ịchọghị desktọọpụ Nwunye, na-eme na sudo apt-wụnye gnome, wụnye desktọọpụ gnome, na gnome fallback na gnome fallback ụgbọ elu enweghị gimmicks, na gnome 3, na ihe dịka ịdị n'otu ma ọ bụ ịdị n'otu na mgbakwunye na Xbmc nke na-abịa dị ka ngwa nkịtị ma mee ka ọ dị oke mfe iji, ọ bụrụ na ihe ịchọrọ bụ Xbmc maka ebe ntụrụndụ ụlọ, yana nke a ị nwere ụwa 2, ọ bụrụ na ike gwụ gị nke xbmc ị nwere ike iji ihe niile ike nke kọmpụta site na ịgbanwe ya na mkpa gị, enwere ike ịgbanwe ya.
Ana m agbagharị ya na netbook Gateway LT4002m, ezighi ezi m ma tinye ya mbipụta kachasị nke 3.8 amd64, netbook bụ bits 32 ma ọ na-arụ ọrụ zuru oke,
Zaghachi Jose J Gascon
Celso mazariegos dijo
Daalụ nke ukwuu maka ndụmọdụ gị.
Ugbu a na laptọọpụ m eji Xubunto 10.2.
Site na ndụmọdụ gị aga m etinye LUBUNTU-14.04. Aga m ahụ otu o si agba.
Ekele si Guatemala.
Zaghachi Celso Mazariegos
M na-eji Linux Mint 17 Nwunye ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Aga m anwale Chrome OS, mana ebe ọ bụ naanị na ọ na-eje ịnyagharịa na ihe ọ bụla ọzọ, na-enweghị ike ịwụnye nchịkọta na ihe ndị yiri ya ...
enweghi ntupo dijo
Ndewo onye ọ bụla, a na m emepe nkesa a na-akpọ Xanadu Linux maka kọmputa nwere obere ihe dabere na Debian SID, ọ dị na beta, ọ bụrụ na onye ọ bụla n'ime gị chọọ ịnwale ma nye echiche gị, a ga-anabata ya nke ọma, ebe a bụ adreesị si ebe enwere ike ibudata: https://xanadulinux.wordpress.com/
dịkwa mma. Aga m anwale ya. daalụ!
Dennis L. dijo
Ọ bụrụ na ha eme nkesa na-anaghị ekpo ọkụ laptọọpụ nke ukwuu, mgbe ahụ nke ahụ ga-abụ nkesa m Haha
Zaghachi Dennis L.
Ọ dị mma, enwere m obere HP, ọ bụ akwụkwọ ọgụgụ mara mma nke 6930p, dị ezigbo mma ma na-arụ ọrụ nke ọma na Windows, n'ihi na mgbe ị na-anwale ụdị nkesa Linux dị iche iche, Fedora, Linux Mint, Ubuntu, Xubuntu, Kali, Elementary, Debian, na ihe niile sitere na otu ihe, laptọọpụ na-ekpo oke ọkụ ... Ọ dị egwu n'ihi na na Windows nke a emeghị, ọ naghị eme ebe ọ bụ na m tinyere ya na nkebi. Onye ọ bụla maara nke nkesa ọ bụla nke na-adịghị akpata nke a ?? Ike gwụrụ m ịnwale ule na nnwale na ọ bụ otu ihe ahụ na nkesa niile… Enyemaka ọ bụla ??
Na ihe mere lxle nke dị mma karịa lubuntu na ndị ọzọ, nyochaa LXLE ga-adị mma http://lxle.net/
Ihe na-akpali mmasị, n'oge ahụ enweghị m "kọmputa", naanị nzuzu 1.66 GHz netbook na 1 GB nke DDR2 RAM, n'ihe gbasara njiri akụ, kedu ọtụtụ ihe ga - adị n'etiti "ọcha" arch linux, manjaro na crunchbang ?
Onweghi onye na ekwu okwu banyere Elive ???
Zaghachi ka roky
crunchbang n’enweghị mgbagha ọ bụla nke kacha mma best.
Ekwenyere m, nwa amadi.
Kpamkpam kachasị mma, arụnyere m ya wee depụtaghachi ya na USB, yabụ enwere m ike ịkwanye ọtụtụ PC, ana m eji ya na Thinkpad T43.
Ekele m, enwere m mintosx, ọ bụ Linux na m lap na 64 bit ma dị mma karịa imeri 7 ma ọ na-eju m anya na ọsọ ya, mgbe m na-emepe ọtụtụ windo, ma miri emi 2014.1 ma dịkwa ukwuu.
Biko kwue nke m ga-eji. Ana m achọ Linux distro
na-enweghị a na-enwu nsogbu, na-enye m ohere gbanwee ihie
mfe, karịsịa maka kọmputa nwere ihe na-erughị 400 ebe nchekwa
Echere m azịza ya.
Ndewo ezigbo abalị, sọftụwia ọkụ maka igwe na-akọwapụta ihe na-emetụta m mgbe niile, ma enwere oge mgbe m na-abanye Ubuntu na "cacharrie" ihe m na-enweghị ike ime ugbu a, eziokwu ahụ kewapụrụ m na Linux bụ n'ihi Nke ahụ, Achọghị m itinye otu n'ime ihe ndị a na ya maka ụjọ nke ịrapagidesi ike na-edozi obere nsogbu.
opekata mpe edozila ..
Aerorazombies nke Lionofsnow dijo
Ndewo, daalụ maka ozi ahụ. Enwere m Ohere asatọ na Zorin 9. Nakwa budata OS dị egwu, a na-akpọ ya ReactOs ... ọ dị nwute na "live cd" nọrọ nwa oge na-eme ihe na ngwaike ma enweghị m ike ịwụnye ya (ọ dị mma, ọ bụ m). Onwere onye nwere ike zi m OS a, ana m ekele gi.
Zaghachi na Lionofsnow Aterrazombies
Ozi ndi ozo na:
Ahụmịhe m na aka abụọ Acer Aspire One D257 (Intel Atom processor, 2 Gb Ram na 500 Gb diski diski), bụ na mgbe a na-anwale Fedora 21 na Live CD ọ amataghị keyboard; ya mere ejiri m Ubuntu 14.10 nwalee ya na enweghị nsogbu na njirimara keyboard ma ọ bụ WiFi, naanị anyị ga-agbakwunye nkwado maka Spanish. Agbam ume site na post a, mhichapụ Ubuntu ma wụnye Lubuntu 14.10, nke na mgbakwunye na ịmata Wi-Fi, keyboard (a ga-etinye nkwado ahụ n'ụzọ dị mfe), banye ngwa ngwa ma lelee vidiyo YouTube. Maka oge ihe niile dị mma.
Daalụ maka post na nkọwa gị, ha na-enyere aka.
Ndewo, m ga-achọ ịma nke kachasị sistemụ arụmọrụ maka igwe a
inteel gma3600 ngosi ọkwọ
Intel® Atọm ™ CPU N2600 @ 1.60GHz × 4
na-akwado x64 na x86
dị ka Linux onye ọkwọ ụgbọala na-ese ihe ọ na-eji bụ PowerVR SGX545
fedora x64 bu onye nyere m gnome3 gburugburu di nma x true
Ọ ga-amasị m onye iji igwe a na-ejegharị n'ihi na isiokwu nke ndị eserese ahụ na-ewute m nke ukwuu
Zaghachi ka facu
Isiokwu ahụ dị ezigbo mma, m si na Windows wee na-eme nzọụkwụ mbụ m n'ime Ubuntu, na Linux ụwa, dị ezigbo mma, nsogbu ndị m nwere ike idozi naanị ịchọ ihe ọmụma ahụ, ọkachasị na desdelinux, oge ha ewere a na-enwe ekele.
Ana m asị gị nnọọ! Mmakọ! Paul.
Enwerela m crunchbang maka afọ 2 na hp mini 110 na 2gb da ram ma ọ bụ ngwa ngwa ngwa ngwa, kwụsie ike na mkpụmkpụ, mkpuru!
ma ụfọdụ mmemme emeela ochie na ndị ọzọ enweghị ike ịwụnye n'ihi ọhụụ nwere ike ...
Agbanyeghị, m laghachiri na windo 7 na igwe ahụ naanị maka bluetooth, mana ọrụ m ga-arụ ebe ahụ emechaala, yabụ ana m ahụ nkesa dị ngwa ngwa dịka CB ma ọ bụ karịa karịa ma nke ahụ na-enye m ohere. inwe mmemme kachasị ọhụrụ ...
Ọ bụ ezie na ekwuru na netbook bụ naanị ịlele ozi ma ọ bụ tinye nkata ahụ, echere m na enwere mperi n'ihi na n'oge m na-eji ya na CB na obere igwe ahụ mere ihe niile (dịka onye nhazi ahụ kwere) ọ bụ multimedia center, isi mmalite ego, fapmachine… ihe niile!
ma dị ka m kwuru, CB bụ a bit ochie na m na-achọ ihe bụ otu ihe ma ọgbara ọhụrụ….
Na m mezue isiokwu ahụ, yana nkọwa banyere sistemụ arụmọrụ niile. Onwe ya, ebe ọ bụ na Akwụkwọ ndetu nwere obere RAM, Ubuntu na-arụ ọrụ zuru oke. Ọ nwere a nnọọ enyi na enyi interface na dị mfe iji. N'adịghị ka sistemụ ndị ọzọ, ọ bụ n'efu na ngwa ya niile kachasị elu.
Enyi, enwerem Dell Inspiron Mini 10V ma n’ime ya, enwegoro xPud, ma odi m “ogbugbu” ebe obu na obu “ezi” ma “oge”, odighi mgbanwe obula ma apughi itinye ngwa ya a kwụsịlarị, kedụ nke ị ga-akwado maka netwọ m Dell Inspiron Mini 10V. Cheers!
Ntụnye: tụlee 2, otu, nke kachasị dị ka gị dịka njirimara nke ndetu na 2, nke na-agbanwe ma ọ bụ nwee ike ịwụnye ngwanrọ ma ọ bụ ngwugwu, ebe m nwere ike idezi webs, html, php, wdg na ụfọdụ nchịkọta akụkọ ihe oyiyi nke ahụ bụ ihe m na-eche karịa, na xPud enwere m ike ịwụnye ihe onyonyo onyonyo yiri Photoshop. Cheers!
ịma mma dijo
Agbalịrị m ọtụtụ distros a kpọtụrụ aha ebe a ma ha dị mma, Achọrọ m ịnwale JoliOS n'ihi na ọ na-eme ka m maa mma, agbanyeghị, ka m gwa gị na ugbu a ma na m na-eji oghere eme ihe mgbe niile, ọ dịkwa okomoko
M na-eji chromebook, ọ na-ewetakwa chrome os, okay, ọ bụ ihe nchọgharị ngwa ngwa na nke ahụ, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na enweghị ngwa ọ bụla na-adịghị n'ịntanetị na nke ahụ na-ewute m. Ka ọ na-abịa na ndabara, m egwu ịgbanwe OS maka onye ọzọ, nke dị na-agaghị amalite ọzọ na e nwere ihe fọrọ nke nta ọ bụla Nkuzi na-esi agbanwe ma ọ bụ dozie a ngwaike.
Ekwadoro m gị ịnwale ya ma ọ bụrụ na ị ga-enwe ya na kọmputa, dịka ọmụmaatụ na kichin, ma ọ bụ n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ, ma ọ bụ n'akụkụ TV na ime ụlọ. Ọ bụrụhaala na enwere wifi, ọ na-arụ ọrụ maka ihe niile.
Enwere m acer aspire 3756z laptọọpụ, 15.6 screen, 4GB RAM, Intel Pentiun dual core T4200 2.30 Gz processor, 300 GB draịva.
emepeuse XD M na-akwado ya mgbe niile na m nwere afọ ole m jiri ya, m gbalịrị Ubunku, Kubuntu, Fedora, mmm ọtụtụ mana enwere m mmasị na n'ozuzu m na-akwado gị na desktọọpụ GNOME mana m na-eji KDE eme ihe ọ bụla ngwa ngwa.
Biko, ọ dị ngwa, enwere ike ịgwa m nke n'ime sistemụ arụmọrụ arụmọrụ niile nwere ike ịwụnye dị ka windo !!!!!!!!!!
onye obula. Naanị ịkwesịrị ịmepụta nkebi maka windo na agbatị maka Linux distro gị, Ubuntu dị mfe karịa okwu abụọ
Ihe na - eme m bụ oge ndị m gbalịrị linux m zuru ezu na awa 2, enweghị m ike ịsị na m gbalịrị ọtụtụ distros (ubuntu na fedora) mana ihe na - eme m nzuzu bụ na maka ihe niile m chọrọ ịwụnye. ị nwere ibudata ihe ọzọ na mbụ, ma ọ bụ tinye iwu. Otu atụmatụ nke windo enwetụbeghị m na OS ọzọ bụ mfe nke ịwụnye mmemme.
Enwere m acer aspire na 2gh na 2gb nke ebule, 32gb eMMC. Na windo ọ na-arụ ọrụ dị ezigbo mma mana oge ụfọdụ ọ nwere ụdị ya na ihe nchọgharị ịntanetị. Enweghị m mkpesa pụrụ iche mana ọ ga-amasị m ịhọrọ n'ezie maka linux nke na-enye pc m aka dị iche na mpụga nke windo windo.
Ekwesiri ighota na komputa ahu diri mahadum.
Ọ bụrụ na onye toro eto nwere ike ịtụ aro sistemụ arụmọrụ nke kachasị mma, m ga-enwe ekele maka ya, ọ bụrụ na ọ bụghị, m ga-aga n'ihu na win8.1
Ọ dị mma, ana m akwado ka gị na Windows gị nọrọ ma ana m agwa gị nkwanye ùgwù niile, ọ nweghị ihe ọ bụla ikwusa ozi ọma gị, ma ọ bụ mee mmụọ Microsoft. Okwu gị na-egosi na ị kwadoghị etu Linux si arụ ọrụ. Ihe zuru ezu bụ nke a: either chọrọ ya ma ọ bụ kpọọ ya asị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ya, ị ga-achọ etu ị ga-esi mara etu o si arụ ọrụ ma ị ga-ewere ihe ịma aka nke ịmụ ihe niile ma ọ bụrụ na ọ bụghị ... ọ bụghị maka gị. M na-eji Linux kemgbe 1998 na desktọọpụ naanị. Enwere m mini Dell nke na-eji Windows (ọ na-ejikwa sọftụwia na-akwụghị ụgwọ) Windows Phone na gam akporo na enweghị m nsogbu na iji onye ọ bụla dịka mkpa m. Ejila ụzọ na-ezighi ezi, ị kwesịrị ịnakwere na ọ bụrụ na ịchọrọ ya, ị ga-achọ otu ị ga-esi mara ya ma gbanwee ya maka mkpa gị.
magburu onwe enyi m aga m anwa zorin you lite ka m hu otu o si di na laptọọpụ mini m na m ga-agwa gị
Gbalịa Bodhi na nsụgharị ọhụrụ bụ ịma mma na igwe na obere ego, ọ na-afụ ụfụ
… .Ọ na-agaghịkwa mepụtara.
Ndewo onye obula:
M na-agụ ihe ị kwuru, isi nsogbu m dị na m, na enwere m pavilion HP dv1010la AMD Athlon, yana 2 GB, bụ oriri nke batrị laptọọpụ, nke ga-ewe ihe karịrị otu elekere, ana m eji CUB Linux ( Ubuntu na ọdịdị nke Chrome OS), mana m ga-achọ ịma nke nkesa kachasị arụ ọrụ na batrị, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, gwa m ụdị ụdị nhazi ahụ na-emetụta arụmọrụ nke distro.
Ekele si Peru
Zaghachi Edgar Ilasaca Aquima
Jose Vega dijo
Kedu maka, n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya, m gbalịrị ọtụtụ nsụgharị m budata ha, gbaa ha ọkụ ruo mgbe m gwụchara diski hehe, mgbe ahụ, m tinyere ha na USB ruo mgbe m chọtara ndị kachasị mma maka netnet net 1100 nke nwere atom na 1 gb nke ebule, ndị nke rụụrụ m ọrụ kachasị mma bụ Elementary (elementary-os-freya-32-bit-multi-ubu), ubuntu mbipụta nke ubuntu (ubuntu-netbook-edition-10.10) mana nkwado ahụ adịla mbụ ma m gbanwere ya kwa, Kali (kali-Linux-2016.2-i386) dị ezigbo mma mana eziokwu agaghị eji ngwa ọrụ ya niile na njedebe m nọrọ na Pepermint (Peppermint-7-20160616-i386) nke ọ bụla n'ime ndị m matara na kaadị ikuku ikuku. na ọ na-arụ ọrụ nke ọma, mgbe ụfọdụ elementrị selata a bit, ma n'ozuzu arụmọrụ dị mma ọ bụla distro.
Zaghachi Jose Vega
Biko gwa m nke kacha mma linux maka dell i5 6gb ram 350 hd laptọọpụ
Ndewo, enwere m ajụjụ. Adịghị m onye ọrụ linux mgbe niile, enwekwara m netbook ochie (ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10) nke na-agba ọsọ na XP, mana disk ahụ gbara ọkụ. Ugbu a achọrọ m ịwụnye ụfọdụ OS na ya ọbụlagodi iji ya sọfụ net. (N'ikwu okwu n'ụzọ doro anya, agadi nwoke m bụ 73 afọ ga-eji ya ma ọ ga-eji ya maka ozi ịntanetị, gụọ akwụkwọ akụkọ ma dee akwụkwọ na-adịghị mma.)
Agbalịrị m ịwụnye Lubuntu kwadoro ebe a ma ihe niile dị mma ruo mgbe m nwetara ozi ezighi ezi na ntinye nke Grub bootloader emezughị.
Ugbu a, OS dị ọkara ebe ahụ ma amaghị m otu esi eme ka ọ rụọ ọrụ ...
Ugbu a ajụjụ. Lubuntu ọ ga-agba ụdị igwe ochie a? You na-akwado ntụpọ ọ bụla ọzọ nke dị nro na enyi?
Nke a bụ atụmatụ nke net: HP Mini 110-1020la Netbook, Intel Atom N270 Processor (1.60 GHz), 1GB DDR2 Memory, 10.1 ″ WSVGA Screen, 160GB Hard Drive, 802.11b / g Network, Windows XP Home SP3.
ekenekwaa m unu ozo
Ezigbo mma post! Aga m anwale ụfọdụ ọgụgụ ma jikọta ha na nke weebụsaịtị a: https://andro2id.com/mejores-distribuciones-linux-ligeras/
Jose Luis Gomez dijo
Ike gwụrụ m ịnwa linux distros, na gọọmentị Argentine exo 355 netbook, yana 2g ebule nke m gbakwunyere x nke bịara 1g. na distro nke rụrụ ọrụ kacha mma maka siri ike ọsọ, nkwụsi ike yana n'ihi na o nwere ndị ọkwọ ụgbọ ala niile bụ akara Linux Linux 3.2 a pipe na ihe niile na-arụ ọrụ na-aga nke ọma ma na-erepịakwa ya na ihe ọkpụkpọ egwu na Firefox na facebook zuru ezu, ọ na-erughị 500 mbak , dị ka usoro ileba anya, na-achọpụta rụọ wi-fi, na ihe niile ị na-etinye, n'ihi na m na ụdị nke igwe, ndị kasị mma distro dabere na debian… ..
Zaghachi jose luis gomez
Akụkụ abụọ nke ule Debian + Mmemme Nwunye
SuperTuxKart 0.8.1 bịarutere na-ebu akụkọ